आध्यात्मिकता - व्यावहारिक विज्ञान यसको आफ्नै जहाँ भौतिक शरीर आत्म-चेतना को पातलो खोल गर्न bioenergetic पुस्तिका छ "म", को अध्ययन र विकास संग गर्नुहुन्छ कि। यो भनेर बुझ्न सुनिश्चित र तपाईं, असीमित सम्भावनाहरू र विशाल सौहार्द को दुनिया गर्न ढोका भएका आफैलाई स्वीकार गर्न तरिका हो।
आधुनिक प्रणाली को छ सूक्ष्म शरीर को अस्तित्व को esoteric ज्ञान आधारित छन्। ती तीन ज्ञात गर्न सकिन्छ, र बाँकी लगभग weightless र दुर्गम छ। केही प्राचीन पूर्वीय संस्कृति र विश्वास समय समयमा अन्य प्रणाली द्वारा चुनौती सातौं खोल भेद।
निम्नानुसार शुरुआती लागि Chakras को सङ्कल्प सारांशित गर्न सकिन्छ। ऊर्जा केन्द्र को यस प्रकारको, कि विकास आध्यात्मिक पूर्णता र शेष हासिल हुन सक्छ।
7 "म", वा सूक्ष्म esoteric मा शरीर
को लोगो - - ठूलो सृष्टिकर्ता को शरीर को एक विचार-फारम बन्द छन् जो विभिन्न शक्ती को embodiment छ यो मान्छे भनेर विश्वास छ। तिनीहरूले सामान्य दृष्टि देख्न सक्नुहुन्छ। योग तपाईं आफैलाई ठेगाना हो, "तेस्रो आँखा" र चक्र प्रयोग खोल्न अनुमति दिन्छ।
पातलो शरीर शरीर को विशिष्ट कार्य लिङ्क, तर तिनीहरूले मूर्त कुरा रूपमा वर्णन गर्न सकिँदैन। तिनीहरूले विशिष्ट प्रकारका, संरचना छैन, तर प्रत्येक ऊर्जा खोल फरक रंग, जो तथापि, जीवनको विभिन्न परिस्थिति फरक गर्न सक्छन् चित्रित छ।
को etheric शरीर छ कुरा envelops र कमजोर असुरक्षित ठाउँमा उपस्थिति तनाव अन्तर्गत मानिस द्वारा सिर्जना र शरीर मा रोग को विभिन्न प्रकारका कारण छन् विज्ञान लार्वा आकर्षित रूपमा, सबै भन्दा कमजोर। यसैले नकारात्मक विचार को materialization मा विश्वास गर्न थाले। खराब, मनन सौन्दर्य विचार छैन।
किन Chakras छन्?
पूर्व तिनीहरूले योग मात्र यसको बल को बोध उद्देश्य छैन, कि तर पनि व्यक्तिगत क्षमता नम्रता गर्न भन्नुहोस्। संतुलन वही मुसीबत छ, तर तपाईं डुबाउनुहोस् र यसलाई आफ्नो अस्तित्व महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। चक्र सुरक्षा पाउन अनुमति छैन, तर यो वास्तविक हो भनेर बुझ्न मदत गर्छ। भावनाहरु संग मर्ज गर्न, अनुभूति मा पौडी खेल्न - कि esoteric सिस्टम को कार्य हो।
Chakras सात छन्। तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै नाम छ र भौतिक शरीर मा विभिन्न अङ्गहरू र प्रणाली को गतिविधिहरु लागि जिम्मेवार छ, तर तिनीहरूलाई नक्कल छैन, आवश्यकता र चाहना को ज्ञान खेल्छ। यो ऊर्जा प्रतान - घटक, कार्य द्वारा जो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य गरेर नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
शुरुआती लागि Chakras विकास लिखित को विश्वास नलाग्दो विविधता छ जो विभिन्न साहित्य, प्रयोग गर्न सकिन्छ, वा esoteric केन्द्र सम्पर्क गरेर। तर, हामी बेवास्ता आधारभूत सिद्धान्तहरू, अर्थात्, नम्रता, शान्ति, धैर्य, अक्सर irreparable नतिजा गर्न ऊर्जा शरीर को निष्ठा निम्त्याउँछ भनेर बुझ्न पर्छ।
हामी महसुस सबै, को परिभाषा छ के को लागि प्रयास गर्न सजग छन् मानव चक्र। शुरुआती लागि आध्यात्मिक संसारको esoteric खोज पहिलो मिनेट देखि छैन। यो आफ्नो प्राण मा अनुरूप फेला को रिस र उत्तेजना pacify महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि मात्र तपाईं आफ्नो "म" सुधार गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
लेखकले को व्यापक लोकप्रियता esoteric पोखरी दाऊदले पाए। "सिकारुहरूको लागि Chakras" - आफ्नो पुस्तक, पावर एकाइहरु को खोज र विकास गर्न व्यावहारिक गाइड - सबै मानव जीवन को पर्यवेक्षकों।
पातलो शरीर को निर्वाचकगण आभा, मान्छे र प्रकृति बीच inextricable लिंक पुष्टि, एक अचम्मको सुविधा छ। निर्दोष, उज्ज्वल व्यक्तिमा यो बबल कि सूर्य iridescent जस्तो देखिन्छ। सही शुरुआती लागि Chakras संग काम गर्न, को क्लीनर आभा दायरामा हुनेछ। मानिस सृष्टिकर्ता गर्न subservient बाँकी हुँदा, शरीर नियन्त्रण हुन्छ।
प्रत्येक चक्र ऊर्जा खोल को रंग गर्न पत्राचार र तीन आयाम स्थित: शारीरिक शरीर, etheric र सूक्ष्म गोले।
रातो - Muldahara - सबैभन्दा सबै को मूर्त। यो जनन नजिकै sacrum तल्लो भाग मा स्थित। आत्म-संरक्षण र सन्तान उर्तानु गर्न आनुवंशिक सामाग्री को स्थानान्तरण प्रदान गर्न चक्र पृथ्वी इच्छा। pelvic स्वास्थ्य, आंत्र, प्रोस्टेट लागि जिम्मेवार।
सुन्तला - svadhishthana - पहिलो विपरीत, यो खुशी को लागि इच्छा खोल्ने समावेश छ। को genitourinary प्रणाली, को जांघ को स्वास्थ्य को लागि जिम्मेवार।
पहेलो - मणिपुर - आत्मसंयम, मान्छे मा प्रभाव को इच्छा छ। नैतिकता र अनुशासन, विश्वास र प्रदर्शन।
Chakras संग प्रयोग गर्ने पातलो झिल्ली बिगार्न छैन धेरै होसियार हुनुपर्छ (शुरुआती लागि यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ)। यो ईथर विनाश निम्त्याउन सक्छ।
हरियो - Anahata - प्रेम र जीवन, sensuality नियन्त्रण एक पेय। को हृदय प्रणाली लागि तार्किक जिम्मेवार।
नीलो - Vishuddha - हरेक मानव मा रचनात्मक क्षमता निहित प्रयोग गरेर प्रतिभा प्रकट गर्छ। घाँटी मा अंगहरु को समारोह Regulates।
नीलो - Adjna - अजीब संग संचार को लागि उच्चतम च्यानल। Anatomic स्थान - को eyebrows, "तेस्रो आँखा" बीच।
दुर्गम लागि शुरुआती बैंगनी चक्र। तिनीहरूले मात्र पूर्ण पहिलो छ को ज्ञान आउनुहोस्।
आफ्नै ऊर्जा केन्द्र खोल्ने कार्य शान्त वातावरण, purified विचार संग आराम र तनावमुक्त स्थिति बाहिर गर्नुपर्छ। साथै, संगीत को Chakras लागि प्रयोग गरिन्छ।
सिकारुहरूको लागि यो सरल मन्त्र मनन सल्लाह राम्रो छ। गीत cyclically धेरै पटक दोहोर्याइएको छन्। Mantras आफ्नो propevaya "आफैलाई" र त्यसपछि ठूलो स्वरले सुन्न छ। पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या एक निश्चित संख्या सामान्यतया 11, 21, 31 पटक दोहोर्याइएको छ लागि प्रत्येक पाठ डिजाइन गरिएको छ।
यो चिन्तन उपलब्ध छ?
सहायताको को Chakras खोल्ने लागि शुरुआती बस शान्ति र आनन्द, जसको कल्पना मनन समयमा सम्भव को स्कोप परे छ महसुस भएको छ एक अनुभवी व्यक्ति, हुन सक्छ। Mantras र योग मा अभ्यास तनावमुक्त postures, को चेतना मा अधिकतम गोता अनुमति दिन्छ।
कि Chakras काम कुनै पनि उमेर र धर्मको हुन सक्छ Esoteric दावी। मात्र कुरा रुचि छ जो कोहीले, तर पनि एउटा ऊर्जा हुनुको। समय संग Chakras मार्फत विकास गर्न सक्छौं मानसिक क्षमता।
शरीर को लागि योग को लाभ। योग: लाभ वा हानि?
अलेक्जेन्डर Kulikov - Kundalini योग को दुनिया आफ्नो पुस्तिका
Yogaterapiya मेरुदण्ड: व्यायाम
गर्भवती (1 trimester) को लागि योग। घरमा योग
लिपेट्स्क र क्षेत्रमा मत्स्य पालन: विशेष, सिफारिसहरू र समीक्षा
संचार को अन्तरक्रियात्मक पक्ष। सामान्य विशेषताहरु
सुझाव र निर्देश: मार्फत इथरनेट जडान
एक घुमिरहेको चक्का के छ: फारम, निर्देशन र प्रतिक्रिया। एक पाङ्ग्रा संग काठ घुमिरहेको चक्का: विवरण, विनिर्देशों र समीक्षा
बालिका केही सरल सुझाव, कसरी एक पहिलो तारीख मा व्यवहार गर्न
"प्राग चिहान" अम्बर्टो EKO: तथ्य र मिथ्या
बर्न: शहरका आकर्षण र चित्रहरू
"अपरेसन" वाई "र अन्य साहसिक Shurik": अभिनेता र भूमिकाको